Yangu iPhone Haizotenderi. Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa! [Nhanho-nhanho Nhungamiro] - Iphone
kurota madhimoni achikurwisa zvinorevei
nguva yekushandisa hdr pane iphone
maitiro ekumisikidza purinda pane yangu iphone
Sei iphone yangu ichienda yakananga kuvoicemail
Yangu iPhone Haizotenderi. Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa!
Uri kutendeuka yako iPhone padivi, asi iyo skrini haizotenderedza. Icho chinetso chinoshungurudza, asi usazvidya moyo: Mhinduro yacho ingori swipe uye pombi kure. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei yako iPhone isinga tenderere uye kugadzirisa dambudziko racho.
Sei Wangu Isingaiti Iyo iPhone Yangu Kutenderera?
Yako iPhone haizotenderedza nekuti Portrait Orientation Lock yakavhurwa. Portrait Dhairekitori Lock inokiya yako iPhone's kuratidza mune yakatwasuka chinzvimbo, chinozivikanwa se portrait mode.
Ndingaite Sei Ini Kuti Ndizive Kana Mifananidzo Yekutarisisa Lock Yakavhurwa?
Zvimwe zvekare zvekare zveIOS zvinoshandiswa kuratidza diki yekuvharira icon mukona yekumusoro kurudyi kwechiratidziro kuratidza kuti Portrait Zano Rekuvharira yakavhurwa. Nekudaro, nyowani iPhones uye iOS zvigadziriso hazvicharatidze izvi zvakadzama kubva kuchiratidziro chekumba.
Panzvimbo iyoyo, iwe unofanirwa kuvhura iyo Control Center kuti itarise uye kugadzirisa yako Portrait Dzidziso Lock. Ramba uchiverenga kuti udzidze chaizvo maitiro ekuita izvi!
nhengo dzemuviri muchirungu neSpanish
Ndingaite Sei Ini Kudzima Mifananidzo Yekutarisisa Lock Pane Yangu iPhone?
Kuti udzime Portrait Oriental Lock, swipe kumusoro kubva pasi pechiratidziro kuti uburitse Control Center. Tinya bhatani nekiyi mukati memudonzvo wedenderedzwa kuti ubatidze kana kudzima Portrait Orientation Lock.
rhinoplasty inodhura zvakadii muUSA
Kana iwe ukashandisa iPhone X kana gare gare, maitiro ekuvhura iyo Control Center yakati siyanei. Rova zvakasimba pasi kubva pamusoro kurudyi pakona chidzitiro. Iwe unofanirwa kuona dzinoverengeka mabhatani apa. Tinya iyo inoita kunge kiyi yakakomberedzwa nemuseve kuti uvhure kana kudzima iyo Portrait Orientation Lock.
Kungofanana nepepa rako reprinta, yako iPhone inoratidzira ine mafambiro maviri: Portrait uye nzvimbo. Kana yako iPhone ikabatwa yakatwasuka, iri mu portrait mode. Kana iri parutivi rwayo, iri mumamiriro emamiriro ekunze.
iPhone Mune Mifananidzo Yemifananidzo
iPhone Mune Mamiriro Ezvinhu
maitiro ekuodha pasi podcast pane iphone
Landscape Mode Inongoshanda Mune Mamwe Mapurogiramu
Kana purogiramu ikagadzirwa, mugadziri ane sarudzo yekusarudza kana yavo app ichizoshanda mu portrait mode, landscape mode, kana ese ari maviri. Iyo Zvirongwa app, semuenzaniso, inoshanda chete muiyo portrait modhi. Iyo Messages app uye Safari inoshanda mune zvese portrait uye landscape mode, uye mitambo yakawanda inoshanda chete mune landscape mode.
Kana Portrait Orientation Lock yakadzimwa uye app isiri kutenderera, inogona kusatsigira mamiriro enzvimbo. Ndakaona kesi, zvisinei, uko app isingatenderedze nekuti yakarova. Kana iwe uchifunga kuti izvo zvinogona kunge zvakaitika, vhara maapplication ako , vhurazve iyo dambudziko app, uye edza zvakare. Ini ndanyorawo chinyorwa nezvekuti nei zvisinei nezvaungave wakanzwa, kuvhara maapplication ako izano rakanaka .
Ndirini Pandinofanira Kushandisa Portrait Zita Rekuvharira?
Ini ndinoshandisa Portrait Orientation Lock kana Ndiri tenderera zvakare. Semuenzaniso, Pandinenge ndichishandisa yangu iPhone mumubhedha, iyo skrini inowanzo tenderera pandisingade kuti iite. Portrait Orientation Lock inochengeta yangu iPhone kuratidza munzira kwayo pandinenge ndakarara.
hapana ringtone pa iphone 5
Ndakaona zvakare zvichibatsira pandinenge ndichiratidza mifananidzo kushamwari dzangu. Sezvo ini ndiri kuvashamisa ivo nemapikicha ezveangu mafambiro, ivo vanowanzo kurwara uye vanozvipembedza ivo pachavo - nekuda kwechidzitiro chinotenderera, hongu. NeParrait Orientation Lock yakavhurwa, ndinogona kuvaraidza kwemaawa kumagumo.
Ndiri Pickin 'Kumusoro Shanduko Yakanaka
Ungave uri kuona bhaisikopo,